बैंकको नाफा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हो - Karobar National Economic Daily
बैंकको नाफा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हो
query_builderJune 5, 2017 11:57 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility498
नेपाल बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह । तस्विर :काराेबार
कर्जाको अधिक ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा उत्पादन लागत बढाउने बताउने देवेन्द्रप्रताप शाह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका अतिरिक्त शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमकम तथा बीएल पनि गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव सम्हालेका शाहसँग करिब ३० वर्ष लामो वित्तीय क्षेत्रको कार्यअनुभव छ ।
कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक तथा बिमा समितिको अध्यक्षसमेत भएका शाहले हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व लिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका शाहले साहित्यमा पनि उत्तिकै योगदान गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जायोग्य पुँजीको अभाव देखियो । बैंकहरूले कर्जायोग्य पुँजी बढाउन निक्षेप बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल बैंकको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा निक्षेप बढेको भए पनि समग्र बंैकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको देखिँदैन । बैंकहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाउने क्रम रोकिएको छैन । समग्र वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था तथा नेपाल बैंकको विषयमा शाहसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
हालको अर्थतन्त्र वित्तीय क्षेत्रका लागि अवसरका रूपमा देखिएको छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अधिकांश परिसूचक सकारात्मक छन् । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत दुई दशककै बढी उत्कृष्ट हो ।
चालू आवमा मूल्यवृद्धिदर ५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने सम्भावना छ । समयमा भएको मनसुन र अन्य कारणले कृषि उत्पादन राम्रो भएको छ । पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र विस्तार पनि भएको छ । सरकारको खर्च गत वर्षको तुलनामा बढेको छ । सरकारले तोकेको स्थानीय निर्वाचन पनि पहिलो चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचनपछि ७ सय ४४ भन्दा बढी स्थानीय सरकार बन्नेछन् । यसबाट स्वाभाविक रूपमा राज्यको खर्च बढ्नेछ । आगामी वर्ष भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणले गति लिने देखिन्छ । विद्युत् आपूर्तिको सहजताबाट देशको उद्योग र सेवा क्षेत्र सकारात्मक भएका छन् । तर, घट्दो आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो व्यापारघाटा, सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु जस्ता असहजताहरू पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा बैंकहरू अहिले कर्जायोग्य पुँजीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
निक्षेपको ब्याजदरमा चर्को वृद्धि भएको छ । यसबाट कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । कर्जाको अधिक ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा उत्पादन लागत बढाउँछ, लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् । उत्पादन कम भएमा निर्यात घट्छ, मुद्रास्फिति पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरू सकारात्मक भएको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र नकारात्मक हुनुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने अमेरिकाको हाउजिङ क्राइसिसको समयमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए । वित्तीय स्थायित्वमा विचलन आएको थियो ।
यसले के पुष्टि गर्छ भने वित्तीय अवस्थामा समस्या आएको खण्डमा अर्थतन्त्र धराशायी हुन समय लाग्दैन । तर, अहिलेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रका केही परिसूचक असजिलो अवस्थामा भए पनि ती अल्पकालीन भएको अनुमान छ ।
बैंकहरूको नाफा बढिरहेको छ भने निष्क्रिय कर्जा अहिलेसम्म सहज अवस्थामै छ । निक्षेपकर्ताहरूको धन असुरक्षित भएको संकेत छैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढेको छ । बैंकहरूले होटल, हाइड्रो, सिमेन्ट, स्टिलजस्ता क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी गरेका छन् । नियमनकारी निकाय पनि चनाखो भएर वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो गतिलाई नजिकबाट हेरिरहेको देखिन्छ ।
२००८ मा अमेरिकामा संकट आउँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक चनाखो थियो होला, संकट रोक्न सकेन नि ?
त्यहाँ त्यतिबेला ‘रेगुलेसनहरू’ कम थिए । वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ सजग थियो । तर, त्यहाँका वाणिज्य र इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरू अति स्वतन्त्र भएका थिए । ती बैंकले शून्य डाउन पेमेन्टमा एकै जनाले चारवटासम्म घर बुक गरेका थिए । बैंकले ऋण पत्याउँथ्यो ।
डरल रिजर्भका अध्यक्ष अलान ग्रिन्सप्यान कम रेगुलेसनमा विश्वास गर्ने अर्थशास्त्री थिए । यसैले देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको र बेरोजगारीको दर घटेको उनको विश्वास थियो । तर, उपयुक्त रेगुलेसनको अभावले आर्थिक मन्दी निम्त्यायो ।
पछिल्लो वित्तीय अवस्थाको विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्तो सजगता अपनाएको देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले होसियारीपूर्वक गहिरो निगरानी राखेको छ । वित्तीय क्षेत्रका सम्भावित विचलनलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । कहिलेकाहीँ बैंकहरूलाई रेगुलेसन बढी भयो भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो ।
बैंकहरूको नाफा बढेको कुरा गर्नुभो । चर्को कर्जाको ब्याजदरले नाफा बढेको देखिन्छ । यो सकारात्मक हो र ?
सामान्यतया बैंक वा कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हो । बैंकहरूको नाफा बढ्दा जनताको निक्षेप सुरक्षित रहेको तथा सरकारको राजस्व बढ्दैछ भन्ने पनि हो ।
बैंकहरूको नाफा बढ्नुले देशमा व्यवसायले प्रवद्र्धन भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । घाटा खाने बैंकहरूले जनताको निक्षेपबाट त्यो घाटा पूर्ति गर्छन्, जुन कुरा वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक हो ।
बैंकहरूले ब्याजदरमा मनपरी गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्र बैंकले हालै ब्याजदर निर्धारण विधिको निर्देशन पठाएको छ । बैंकहरूले ब्याज बढाएकाले त्यसमा केही अंकुस लगाउने अभिप्रायबाट यो निर्देशन आएको छ । तर, वास्तवमा ब्याजदर उदार अर्थतन्त्रमा सधैँ माग र आपूर्तिबाट निर्धारण हुन्छ ।
मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा पाएको नियमनकारी निकायको भूमिका ब्याजदरमा घटाउने वा बढाउने पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो । न्यूनतम ब्याजदर तोकिदिन पनि सक्छ । तर, हालको निर्देशन अलि फरक खालको भएकाले यो छोटो समयका लागि लिएको वित्तीय औजार हो भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूले ब्याजदर धेरै बढाएको भन्ने लागेको छ । तर, बैंकहरूले त सधैं आफ्नो अवस्था र बजार हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । बजारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी ब्याजदर हुँदा कर्जा प्रवाह हुँदैन । ब्याजदर बढेको विषयलाई केन्द्रीय बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिनु अर्थतन्त्रमा केही गडबड हुन लागेको संकेतका कारण ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको हुन सक्छ ।
केही बैंकले ब्याजदर अधिक बढाए भन्ने सुनिन्छ नि ?
प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बजारमा ब्याजदर बजारको भन्दा धेरै दिने वा लिने बैंक धेरै टिक्दैन । त्यस कारणले पनि ब्याजदरको विषयमा केन्द्रीय बैंक यति धेरै गम्भीर बन्नुपर्ने थिएन । केन्द्रीय बैंक गम्भीर हुनुमा अन्य पक्षहरू पनि हुन सक्छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा केही ठूला बैंकको स्थिति बिग्रिएमा समग्र सिस्टममा असर पर्ने रहेछ । हाल केही बैंकले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेकाले ब्याजदर बढाए । निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि अन्य बैंकबाट निक्षेप त्यता जान थाल्यो ।
त्यो रोक्न अरू बैंकले पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो । यसरी सबै बैंकको निक्षेपको ब्याजदर बढ्यो । यसबाट स्वभावतः कर्जाको ब्याजदर बढ्यो । कर्जाको ब्याजदर बढ्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भनेर राष्ट्र बैंक चिन्तित भएको हो भन्ने लाग्छ ।
नेपाल बैंक देशकै पहिलो बैंक हो । बैंकमा समस्या धेरै थिए । तपाईंले व्यवस्थापन सम्हालेको करिब दुई वर्ष भयो । बैंकलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो भनिन्छ नि ?
नेपाल बैंक विगतमा बिग्रेको थियो । बिग्रेकै कारणले यसको व्यवस्थापन विदेशीलाई पनि सुम्पनुपरेको थियो । सुधारका लागि राष्ट्रले निकै खर्च गर्नुप-यो । अहिले पनि सुधारकै क्रममा छ । एउटा अस्वस्थ बैंकलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनाको काँधमा आएको छ ।
यो दुई वर्षमा गरेको प्रगति सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र सबै कर्मचारी मिलेरै गरेको हो । सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव प्राप्त गरेका, व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लागेका विज्ञहरू भएकाले पनि व्यवस्थापनलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।
तपाईं आएपछि नेपाल बैंकमा के–के सुधार भयो ?
सुधार धेरै भएको छ । बैंकका वित्तीय सूचकांकहरूमा आएको परिवर्तन नै महŒवपूर्ण कुरा हो । राष्ट्र बैंकले महŒवका साथ हेर्नेे पुँजी पर्याप्तताको अनुपात हो । वाणिज्य बैंकको हकमा यो अनुपात कममा पनि १० प्रतिशत हुनुपर्छ । दुई वर्षअघि नेपाल बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ४.५८ प्रतिशत मात्र थियो ।
हाल बैंकको यो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आव ०७२/७३ मा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेर सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने वाणिज्य बैंक भएको थियो । यसमा केही स्थिर सम्पत्ति बेचेको रकम पनि सामावेश भएको थियो । चालू आवमा खुद नाफा ३ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । दुई वर्षअघि १ अर्ब पनि नाफा थिएन ।
ब्यालेन्स सिटमा करिब ३ अर्ब नेगेटिभ रिजर्भ भएको बैंकको हालको सञ्चिति ३ अर्ब रुपैयाँ सकारात्मक छ । निष्क्रिय सम्पत्तिको मात्रा पनि घटेको छ । यो असारमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्नेछ । गैरकोष आम्दानी बढेको छ, ब्याज आम्दानी करिब दोब्बर हुने अवस्थामा छ । दुई वर्षअघि नेपाल बैंक यो अवस्थामा पुग्छ भनेर सोच्न पनि सकिने अवस्था थिएन ।
चालू वर्षको नाफामा अन्य वर्षको नाफा समावेश भएको छैन । सम्पत्ति बेचेको रकम पनि जोडिएको सन्दर्भमा सञ्चालन नाफाको अंक हेर्दा थाहा हुन्छ । दुई वर्षअघि बैंकको सञ्चालन नाफा नकारात्मक थियो । गत वर्षको चैतमा बैंकको सञ्चालन नाफा १२२ करोड रुपैयाँ छ । यो वर्ष २२० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा हुने देखिन्छ ।
सञ्चालन नाफामा सम्पत्ति बेचेको रकम जोडिएको हुँदैन । सम्पत्तिको बेचबिखन एक निश्चित उद्देश्यले गरिएको थियो । बैंकको पुँजी नपुगेका कारणले राष्ट्र बैंक र सरकारले सम्पत्ति बेचेरै भए पनि पुँजी पु¥याउन भनेकाले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिले सम्पत्तिहरू बिक्री गरिएका हुन् । बैंकको नाफामा सम्पत्तिको बेचबिखनबाट भएको नाफा छुट्टै हिसाब गरिएको छ ।
नेपाल बैंकलाई पहिले विदेशीले र नियमनकारी निकाय आफैंले पनि सञ्चालन गरिसकेको हो । उनीहरूबाट खासै सुधार नभएको हो ?
उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुभयो । बैंकमा यति समस्याहरू थिए कि ती सबै सुधार हुन समय लाग्थ्यो । निष्क्रिय कर्जाको मात्रा घटाउनमा वैदेशिक व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका रहेछ । यसै गरी बैंकको पुँजी बढाउन र अन्य सुधार राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनको समयमा भयो । तर, सुधारको क्रम सकिएन । बाँकी काम अहिले जोडतोडले गरिँदैछ । तर, वैदेशिक व्यवस्थापन वा केन्द्रीय बैंकले फेरि व्यवस्थापन लिनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना छैन ।
वित्तीय सूचक सुधारका अतिरिक्त के परिवर्तन गर्नुभयो ?
विगत दुई वर्षमा बैंक चलाउने सफ्टवेयर एकीकृत भएको छ । पहिले दुईवटा सफ्टवेयरले काम गथ्र्याे । अहिले पुमरी ४ बाट काम हुन्छ । ८२ हजार जनालाई मोबाइल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । १ लाख व्यक्तिले एटीएम सुविधा लिएका छन् । १२ वटा नयाँ शाखा खोलिएका छन् । पेरोल र ट्रेड फाइनान्सलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ । ४० भन्दा बढी एटीएम मेसिन थपिएको छ । रेमिट्यान्स बढाउन विदेशी तथा स्वदेशी निकायहरूसँग सम्झौता गर्ने लगायतका काम भएका छन् ।
आधुनिकीकरणको कुरा गर्नुभयो, बजारमा त नेपाल बैंकलाई परम्परागत शैलीमा चलाइएको बैंक भनिन्छ नि ?
नेपाल बैंक आधुनिक ढंगबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो बैंक हो । संस्था कहिल्यै बूढो हुँदैन । मान्छेको जीवन र संस्थाको जीवन एउटै कुरा होइन । मान्छे बूढा हुन्छन् र मर्छन् । संस्थाहरू मर्दैनन्, बैंकहरू त मर्नु पनि भएन । तर, संस्था र व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँज्ने गरिन्छ । सामान्यतः संस्थाहरू पुरानो हुँदै जाँदा बलिया, ठूला, गुणस्तरयुक्त र विश्वासिला हुने गर्छन् ।
१६३६ इ.मा खुलेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई कहिल्यै बूढो भनिँदैन । बरु इज्जतका साथ स्थापनाको साल बताइन्छ । बेलायतको बार्कलेज बैंक १६९० इ.मा खुलेको हो । के अब त्यो बैंक बूढो भएर काम गर्न नसक्ने भयो त ? भारतकै स्टेट बैंक अफ इन्डिया १८०६ इ.मा स्थापना भएको हो । के तिनीहरू कम प्रभावशाली छन् ?
निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने अवस्थामा नेपाल बैंक आएको हो त ?
यसको नाफाको आकार, नेटवर्क र दिइएको सेवाको दृष्टिले त्यस्तै बुझिन्छ ।
सरकारी बैंकहरूले शाखा पुनःस्थापनामा अल्छी गरेको आरोपप्रति नेपाल बैंकको टिप्पणी के छ ?
सरकारी बैंककै शाखा धेरै छन् । गाउँघरमा यिनकै शाखा बढी छन् । सहरमा निजी बैंकका शाखा बढी देखिन्छन् । नेपाल बैंकले क्रमिक रूपले शाखाहरू पुनःस्थापना गर्दै छ ।
आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
सरकारले वित्त नीति ल्याइसकेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख छ । यसैलाई सहयोग हुने खालको मौद्रिक नीति आउला । ब्याजदरमा अंकुस नलागे राम्रो हो । अहिलेको अवस्थामा सीसीडी रेसियो अलि खुकुलो भए बैंकहरूको कर्जायोग्य कोष बढ्थ्यो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा सीसीडी रेसियो गणना गर्ने तरिकामा केही खुकुलोपन अपनाइएको थियो ।
त्यसलाई अझै केही महिना निरन्तरता दिइए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कम्तीमा पनि सीसीडी रेसियो निकाल्दा विपन्न वर्गमा गएको पूरै प्रत्यक्ष कर्जा कुल कर्जाबाट घटाउन पाइने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बैंकका नयाँ योजना के छन् ?
हामी बलियो बैंक बन्नका लागि प्रयास गर्छौं । यसका लागि नाफा बढाएर मात्र हुँदैन । अब राष्ट्र बैंकले महŒव दिँदै आएका क्षेत्रहरूको पूर्ण पालना गर्ने, तथ्यांक सुरक्षित गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई सहयोग गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनाको दायरा फराकिलो गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यसका लागि लगानी पनि गर्ने योजना छ ।
अब बैंकका प्राथमिकताका क्षेत्र के–के हुन् ?
वाणिज्य बैंकले नाफालाई प्राथमिकता दिन छाड्नु हास्यास्पद हुन्छ । तर, हाम्रा प्राथमिकता थपिएका छन् । अहिले तुरुन्त केही खर्च बढेर डराउने अवस्था छैन । विगत दुई वर्षमा भएको प्रगतिबाट हामीले शक्ति आर्जन गरेका छौं । हामी स्मार्ट अफिसको अवधारणाअनुसार काम गर्न खोज्दै छौं ।
बैंकको शाखामा निक्षेपकर्ता वा कोही छिर्दा कर्मचारीहरू सौहार्दतापूर्वक प्रस्तुत होऊन, काम छिटो होस्, अफिसको वातावरण शान्त होस्, क्लाइन्टलाई सुखानुभूति होस्, यस्तो हामीले चाहेका छौँ । आगामी वर्ष २५ वटा कार्यालय स्मार्ट अफिसमार्फत सेवा दिने सोच छ । यसै गरी आगामी वर्ष २० वटा नयाँ शाखा खोल्ने योजना छ । आगामी वर्ष हामी भिसा कार्ड जारी गर्दैछौँ । ट्रेजरी व्यवस्थापनमा नयाँ सुरु हुन्छ । बैंकलाई बलियो बनाउनका लागि बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति लिने योजना छ ।
तपाईं बिमाक्षेत्रसँग पनि जोडिनु भएकाले नयाँ बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिने विषयमा तपाईंको बुझाइ के छ ?
२०६५ देखि २०६७ को २ वर्षभन्दा कम अवधि म बिमाक्षेत्रमा संलग्न रहें, तर अब यसबाट अलग छु । त्यसैले मेरो बुझाइ कतिको यथार्थपरक रहला भन्न सक्दिनँ । सरसरती हेर्दा नयाँ १० बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिँदा बजारको आवश्यकताभन्दा बढी कम्पनी हुने भए भन्ने लाग्छ । बैंकहरूमा पहिले त्यस्तै भएर अहिले एकीकरणको चरणमा छन् । यस्तै बिमाक्षेत्रमा पनि यही रोग दोहोरिने चिन्ता छ । यद्यपि मेरो बुझाइ अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको भने होइन ।
तपाईं साहित्यकार र लेखक पनि हुनुहुन्छ । प्रोफेसनल जीवन र साहित्यमा कसरी तालमेल बनाइराख्नुभएको छ ?
बैंक प्रमुखको काम फुर्सदिलो हुँदैन । अफिसमा बस्नु मात्र प्रमुख कार्यकारीको काम होइन । अफिसमा नहुँदा पनि निरन्तर बैंककै बारेमा सोच्नुपर्ने हुनाले साहित्य लेखन सम्भव छैन । अलि–अलि पढ्छु । मेरो लेखन क्षेत्र भनेको फिक्सन हो, जुन सिर्जनात्मक हुन्छ, मेहनत आवश्यक पर्छ । यो जिम्मेवारी हुँदासम्म साहित्यतर्फको काम सम्भव देख्दिनँ ।
बैंक अर्थतन्त्र नेपाल बैंक कृषि विकास बैंक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट